iPhoto Wepụ Duplicates - Olee otú Wepụ iPhoto Duplicates Mfe
iPhoto bụ a zuru okè free foto edezi software arụnyere na ọhụrụ ọ bụla Mac n'ihi na ọrụ hazie foto, mee ka foto akwụkwọ, slideshows, kalenda, wdg ma na-eso foto na ihe n'ụzọ dị mfe. Ị nwere ike nwetara ọtụtụ puku foto na ị iPhoto Ọbá akwụkwọ na ị pụrụ merged ọtụtụ iPhoto ihe ma ọ bụ ọbá akwụkwọ na ugbu a ị na-ahụ na e nwere gị ọtụtụ duplicates!
E nwere nnọọ ọtụtụ foto na i nwere ike ịhụ ọ bụ nnọọ ike ịchọpụta na ihichapụ duplicates. N'ezie, i nwere ike iṅomi ọ bụla foto gị iPhoto collection na ihichapụ onye ọ bụla aka. Ma ime ga-a otutu oge. N'ebe a, anyị ga-agwa gị ụfọdụ mfe ụzọ wepụ iPhoto duplicates ngwa ngwa.
Method 1. Wepụ iPhoto duplicates na duplicated Annihilator
Method 2. Ndị ọzọ free ma ọ bụ ụgwọ ngwa ọdịnala na-ewepụ iPhoto duplicates
Apple adịghị enye ụzọ dị mfe iji wepụ iPhoto duplicates ozugbo. Otú ọ dị, i nwere ike ime ka ọ dị mfe na a kemfe ịba uru - iPhoto oyiri Annihilator. Ọ bụ a nkwụnye na-enyere gị aka tufuo iPhoto duplicates. The ọmịiko ya bụ na ọ bụghị free na ị ga-akwụ $7.95.
Iji wepu duplicates, dị nnọọ oghe oyiri Annihilator na ị ga-ahụ a taabụ aha ya bụ Find duplicates. Biko jide n'aka "MD5 checksum" na "Mee duplicates 'okwu oyiri" na-ahọrọ na Mmasị. Nke a ga-hụ na usoro ihe omume ga ike iṅomi ihe osise nile dị na gị Ọbá akwụkwọ na ịkpado niile oyiri mbipụta ọ chọtara site n'itinye "oyiri" na-ekwu. Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ihe oyiyi, na usoro nke achọta duplicates ga-a nnọọ ogologo oge. Ọ bụrụ na ị na-eji na-ekpe ikpe version nke ngwa, ọ ga na ike iṅomi na kasị 500 oyiyi.
Ị ga-ahụ na oyiri Annihilator kpaliri niile nke ihe oyiyi faịlụ ọ na-ekwere na-duplicates n'ebe ahụ. Ị nwere ike ịhọrọ ma Chuck ha ma ọ bụ, alternately, na-eziga ha azụ iPhoto ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọgide na ya.
E wezụga duplicated Annihilator, e nwere ndị ọzọ iPhoto duplicates wepụ ngwa inyere gị aka ọrụ ahụ, ka ọ bụrụ free ma ọ bụ ụgwọ. Lee, anyị depụta ọtụtụ:
# 1. Oyiri Cleaner
Oyiri Cleaner bụ kemfe iPhoto oyiri remover ka enyere gị aka imeri oyiri foto na vidiyo. Ọ na-eme ọrụ nke na-achọta na wepụ duplicates na iPhoto budata mfe.
# 2. Araxis Chọta oyiri Files
Araxis Chọta oyiri Files bụ ihe dị mfe na-eji ngwa na-enyere aka ị na-ahụ & jikwaa faịlụ na oyiri ọdịnaya, n'agbanyeghị aha.
iPhoto Library Manager bụ a keukwu iPhoto aka inokota gị iPhoto. E wezụga ndị dị ike ike na-achọ na-ewepụ oyiri, ị nwekwara ike jikota, gbawara n'etiti, wughachi ma ọ bụ jikwaa gị iPhoto ọba akwụkwọ n'ime clicks.
10 iPhone Music enyefe n'ihi na windo na Mac
3 Ụzọ nyefee Videos si gị iPhone ka iPad enweghị iTunes
> Resource> Nyefee> Olee Wepụ oyiri iPhoto Photos Mfe